Nepal Samaya | २०४४ सालको रंगशाला काण्ड र आइतबारको हुण्डरी
२०४४ सालको रंगशाला काण्ड र आइतबारको हुण्डरी
२०४४ साल फागुन २९ गते दशरथ रंगशालामा दर्शक खचाखच भरिएका थिए। दिउँसो ३ बजे जनकपुर चुरोट कारखाना र बंगलादेशको मुक्तिजोद्धाबीच फुटबल खेल चलिरहेको थियो। दुवै टोली उपाधि भिडन्तमा रहेकाले प्रतियोगिता निकै रोचक थियो।
काठमाडौं - २०४४ साल फागुन २९ गते दशरथ रंगशालामा दर्शक खचाखच भरिएका थिए। दिउँसो ३ बजे जनकपुर चुरोट कारखाना र बंगलादेशको मुक्तिजोद्धाबीच फुटबल खेल चलिरहेको थियो। दुवै टोली उपाधि भिडन्तमा रहेकाले प्रतियोगिता निकै रोचक थियो।
खेल चलिरहँदा अचानक ठूलो हुरी र पानी एकैसाथ चल्यो। मानिसको भागभाग भयो। रंगशालाका सबै ढोकाका ग्रिलगेटमा चाबी ठोकिएको थियो। मानिसको भागदौड चल्दा एकआपसमा च्यापिएर ७१ जनाको ज्यान गयो।
सोही घटनामा नैतिक जिम्मेवारी स्वीकार्दै तत्कालीन शिक्षामन्त्री केशरबहादुर विष्टले राजीनामा दिएका थिए। यो घटनालाई नेपाली खेलकुदको इतिहासमा कालो दिनका रुपमा सम्झने गरिन्छ।
खेलको आयोजना अखिल नेपाल फुटबल संघले गरेको थियो। खेलकुद परिषद् त्यसबेला शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत पर्थ्यो। त्यो शिक्षा मन्त्रालयको आयोजना पनि थियो। तर मन्त्री विष्टले उच्च नैतिकता दर्शाउँदै राजीनामा दिएका थिए।
त्यसबेला मौसम पूर्वानुमानका आवश्यक उपकरणसमेत प्रभावकारी थिएनन्। अहिलेको जस्तो भए खेल अगाडिपछाडि सार्न सकिन्थ्यो। त्यसबेला रंगशालाको ढोका शिक्षामन्त्रीले खोल्ने र लगाउने पनि होइन। हुरी र पानी एकैसाथ आउँदा दौडादौड हुँदा च्यापिएर त्यत्रा मानिसले ज्यान गुमाउनुपरेको थियो। तर, तत्कालीन शिक्षामन्त्री विष्टले तत्काल राजीनामा दिएका थिए। अहिले सक्रिय राजनीतिबाट सुस्ताएका विष्टले सोमबार नेपाल समयसँगै भने, ‘नैतिकताको खडेरी नपरोस् भनेर मैले त्यो काण्डमा राजीनामा गरेको हुँ।'
बिष्टले भने, ‘तराईमा आइतबार आएको हावाहुरीले धेरै मानिसको मृत्यु भएको छ। धेरै घाइते भएका छन् तर त्यसको जिम्मेवारी कोही लिँदैनन्।’ उनले त्यसबेला नैतिकता ठूलो भएकाले आफूले त्यसको कदर गरेको बताए। उनका अनुसार अहिले सत्तामा रहेकाहरु मान्छे मारेर आएका भएकाले यिनबाट नैतिकताको आस गर्नु बेकार हो।
आइतबार राति आएको हावाहुरीले बारा र पर्सामा गरी तीसभन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन्। चार सयभन्दा बढी घाइते भएका छन्।
यस विपत्तिमा कसैले पनि नैतिकता देखाउनुनपर्ने कुराले ०४४ सालको रंगशाला काण्डका साक्षी केशरबहादुर बिष्टको नैतिकताले गिज्याई पो रहेको छ कि?
राष्ट्रिय अभिलेखालयले नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयको श्रीसदनका दुई कोठामा रहेका पूर्वराजा वीरेन्द्र शाहको दस्तावेज सूचीकरण सुरु गरेको छ। अभिलेखालयबाट सेवा निवृत्त दुई कर्मचारी र तीन जना बाहिरबाट करारमा नियुक्त गरी दस्तावेज सूचीकरण थालिएको हो।
ओमिक्रोन नियन्त्रणसम्बन्धी आदेश : के गर्न हुन्छ, के नहुन्‍न?
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले विश्वव्यापी महामारीका रूरुपमा फैलिएको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनसहितको कोभिड–१९ महामारीको तेस्रो लहर नेपालमा समेत बढ्दै गएकाले सोको रोकथाम तथा नियन्त्रण, निदान र उपचारका लागि आदेश जारी गरिएको बताए।
स्पा व्यवसायलाई मर्यादित रुपमा सञ्‍चालन गर्नुपर्ने
वाग्मती प्रदेशका संस्कृति एवं पर्यटनमन्त्री दीपेन्द्र श्रेष्ठले स्पा व्यवसायलाई मर्यादित ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। स्पा संघ नेपालको आइतबार आयोजित प्रथम वार्षिकोत्सवका अवसरमा उनले मुलुकको अर्थतन्त्रको बलियो आधार स्पा क्षेत्र भएकाले यसलाई मर्यादित ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका हुन्।
भारतबाट अवैधरूपमा भित्र्याइएको ६४० केजी माछा नष्ट
गौरादह नगरपालिका–३ सहिदगेट अगाडिबाट मे१च ३६३२ नंको छोटा हात्ती गाडीमा भारतबाट अवैधरूपमा ल्याइएको माछा प्रहरीले बरामद गरेको हो।
प्राकृतिक विपत्तिबारे पूर्वसूचना संयन्त्र प्रभावकारी बनाउँछौं : गृहमन्त्री
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले भूकम्पीय जोखिमका दृष्टिले मुलुक ११ औं नम्बरमा रहेको जानकारी गराउँदै सोबाट सुरक्षित रहन बलियो संरचना निर्माणमा सबैले लाग्‍नुपर्ने बताए।
अव्यवस्थित सहरीकरण नै भूकम्पीय जोखिमको प्रमुख कारण : प्रधानमन्त्री देउवा
चौबीसौँ भूकम्प सुरक्षा दिवस, २०७८ का अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा उनले भूकम्पीय जोखिम घटाउन पूर्वाधार निर्माणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए।